Video mbipụta dị mkpa iji mee ka gị na FLV faịlụ n'ime ihe ị ga-achọ ka ha bụrụ. The ozi ọma bụ na e nwere ọtụtụ ndị a editọ na ị nwere ike nweta free. N'okpuru bụ ụfọdụ nke n'elu ise FLV editọ maka ojiji. Onye ị na-ahọrọ ga-adabere na ụdị edezi i nwere n'uche.
Ọ bụla Video Ntụgharị
Movica bụ a graphic ma ọ bụ nkiri nchịkọta akụkọ nke Windows Media (.wmv), MPEG faịlụ na FLV na fim ndị ike họrọ ma ọ bụ hichapụ multiple òkè si a video faịlụ. Ọ na-enyere ndị ọrụ na-cop, mado, sonyere, gbawara n'etiti na hụchaa vidio. Nnọọ ngwa ngwa na mfe iji.
Ụfọdụ ọnọdụ ozi na-esi ike ịghọta ihe;
Adịghị akwado 64-bit na kọmputa.
Nke a freeware bụ fechaa na ọrụ-enyi na enyi. Ọ enye gị ohere mfe dezie gị video faịlụ site na nanị ihichapụ anya na-achọghị edere. Ka a okwu nke eziokwu, ọ na-akwado a ọnụ ọgụgụ nke video formats. The akụkụ kasị mma banyere usoro bụ na Free Video Dub dịghị mkpa re-encode ihe ọ bụla, nke na-eme na mbụ àgwà nke gị video.
Multi-lingual interface nke na-eme ka ọ dị mfe iji;
Ọtụtụ video formats akwado.
Pụrụ isi ike tinye visual mmetụta.
Video toolbox bụ otu oru oma na onye ọrụ-enyi na enyi online video nchịkọta akụkọ na-enye gị bee, akuku, jikota, ifiọk na-egwu video. Ọ na-akwado dị iche iche video formats dị ka 3GP, AMV, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, M4V, MP4, MPEG, mpg, RM, VOB, WMV na ndị ọzọ. Ọ na-atụmatụ ihe Advanced File Manager nke na-eme ka ọ dị mfe n'ihi na ị na bulite videos na ibudata faịlụ site saịtị ndị ọzọ na Web.
Ekwe gị faịlụ nha ka 600MB.
Nke a abụghị nanị a Ntụgharị ma a ọkpụkpọ na nchịkọta akụkọ ka mma. Ọ na-enye gị a n'aka iji tọghata faịlụ n'ime kwesịrị ekwesị formats maka n'idebata na weebụ na kwa maka ojiji na mobile ngwaọrụ. The ngwaọrụ dị mkpa maka edezi bụ mfe dị na ị na-adịghị na-aga site ọzọ download usoro iji nweta ha.
Apụghị tọghata ọdịyo faịlụ.
I nwere ike igosi ọtụtụ video edit ọrụ na nke a free video edezi usoro. A na-agụnye watermark, mkpụbelata, akuku, jikota nakwa dị ka pụrụ iche utịp. Ị nwere uru nke multiple mmepụta formats na nke a nanị pụtara na gị mbipụta, ị na-adịghị na-akwụsị na FLV faịlụ. N'ezie, ọ nwere ọtụtụ video faịlụ edit nhọrọ izute gị mkpa.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a ọzọ ndị ọkachamara MP4 video joiner, Wondershare Video Editor ukwuu tụrụ aro. Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke video formats gụnyere MP4, FLV, MOV, AVI, WMV na ndị ọzọ. Na ya, i nwere ike ọ bụghị naanị sonyere dị iche iche videos ọnụ, kamakwa tinye ikwu n'ụzọ na ndị ọzọ na mmetụta na-amasị gị.